FAMPAHALALANA SY SARY MITERAKA ALIKA BULLOXER DOG - ALIKA
Fampahalalana sy sary miteraka alika Bulloxer Dog
Alika mifangaro mpiady totohondry / mpiady totohondry amerikana
Tyson the Bulloxer efa lehibe - Amerikanina Bulldog (ray, fotsy) ary Boxer (reny, zana-trondro ary fotsy)
Ny Bulloxer dia tsy alika madio. Lakroa misy eo anelanelan'ny mpanao ady totohondry ary ny American Bulldog . Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazan-kazo mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra eo amin'ny hazofijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ireo karazana ao amin'ny hybrid ianao. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ka hatramin'ny 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro .
DBR = Rejistra misahana ny endrika mpamorona
Registra ho an'ny mpamorona endrika = Bull Boxer
Tantely an-jaza Bulloxer amin'ny 3 volana— 'Ny tantely dia avy amin'ny ra feno American Bulldog ary brindle maizina feno rà mpanao ady totohondry . Tiany ny mitoby, mandeha, milomano ary matory! '
Mia the Bulloxer amin'ny maha-alika azy 6 volana— 'Nentinay nody i Mia nandritra ny 9 herinandro. Tsy mbola nanana an'io mifangaro karazany taloha. Nanana roa izahay Keeshonds tao anatin'ny 24 taona lasa. Tena mahafatifaty i Mia! Tiany daholo ny olona, ​​tia tapa-kazo, vatolampy, voasarimakirana tranainy avy amin'ny hazo misy antsika (mivovo amin'ireo). Tiany MANDEHA , milalao miaraka alika hafa ary mandeha. Rava izy ary mahay manao fitaovana antsika sahady. Izy dia toy ny zafikelinay voalohany. Mora ny fiaran-dalamby samy fetsy ary vilany . Tianay fotsiny izy. '
Tyson dia Bulloxer, izay fifangaroan'ny Bulldog amerikana (ray, fotsy) sy Boxer (reny, zana-trondro ary fotsy). 9 volana izy tamin'ity sary ity.
Ny dadan'i Max dia Bulldog amerikana somary lehibe (120 lbs.) Ary ny reniny dia Boxer kely mpanao bokotra (35 lbs.).
'Ity dia sarin'ny zanak'alika Bulloxer Kap'n Khaos fony izy tokony ho telo volana. Tamin'ny 6 volana dia sahabo ho 65 lbs izy. ary mbola mitombo. Toetra lehibe ary tena marani-tsaina. Mahay loatra raha manontany ahy ianao. Ny rainy dia voasoratra anarana American Bulldog izay milanja manodidina ny 110 lbs. ary ny reniny dia voasoratra anarana tsara tarehy brindle Boxer , kely amin'ny lafiny kely tokony ho 45 lbs. Ampiofanina ho alika fitsaboana izy handeha hamonjy hopitaly hitsidika olona mila tsiky kely. Heveriko fa vitany izany! Fantatro fa nampihomehy ahy izy. '
Khaos the Bulloxer amin'ny faha-7 volana— 'Heveriko fa tsy ho alika kely toa ilay vehivavy nitazantsika azy hoy izy. Efa mahatratra 72 lbs izy. ary mbola zazalahy mitombo izy. Nahavita ny iray amin'ireo fanamarinana momba ny fankatoavana izy ary mbola mila roa hafa alohan'ny hahafantarana azy ho alika fitsaboana. Alika tsara izy ary tena marani-tsaina ary malemy fanahy tokoa. Indraindray izy dia omby any amin'ny fivarotana sinoa rehefa milalao ao an-trano izy fa milamina rehefa voantso. Heveriny fa alika am-pofoana toa ny fangaro Jack Russell kely antsika. '
Khaos the Bulloxer amin'ny 7 volana dia milalao amin'ny frisbee-ny
Zahao ilay Bulloxer lahy amin'ny 8 volana, milanja 88 pounds— 'Ny reniny dia Bulldog Amerikanina ary Boxer ny rainy.'
Koko the Bulloxer puppy amin'ny 10 herinandro izay matory miaraka aminy taolana SY kilalao .
Koko the Bulloxer puppy amin'ny faha-6 volana— 'Fanampiny mahafinaritra ho an'ny fianakavianay izy. Ny reniny dia Amerikanina Bulldog ary ny rainy dia mpanao ady totohondry. Tamin'ny 6 ½ volana dia nilanja teo ho eo izy. 55 lbs. Tsy afaka nangataka mpikambana ao amin'ny fianakaviana tsaratsara kokoa izahay! '
Brice the Bulloxer amin'ny faha-8 volana
Sam io. Izy dia mixer American Bulldog / Boxer. Ny rainy dia 140-lb. Amerikanina Bulldog sy ny reniny dia 90-lb. Boxer. 4 4 volana izy ary alika kely mahafinaritra manana ny maha izy azy. Tiany ny milalao trondro ary mihazakazaka haingana kokoa noho ny alika hafa ao amin'ny zaridainan'alika izy. Tena be fitiavana izy ary manana fihetsika mahafinaritra nefa azo antoka fa manana tanjaka sy somary mafy loha. Izy dia nanampy tsara ho an'ny fianakavianay. '
Sam the Bulloxer amin'ny faha-3 1/2 taona— 'Izy rehetra dia 110 lbs. Izy ihany no alika haingana indrindra hitako, ary nitombo ny fananany toetra tsara indrindra. Miara-mijery televiziona miaraka amintsika izy ary milalao amin'ny olon-drehetra (sariaka aminy) amin'izay mety ho azony. Ny hany tadiaviny amin'ny fiainana dia ny fientanam-po amin'ny filalaovana rano mangatsiaka sy fihinana. '
bulldog afangaro amin'ny mpiandry ondry alemanina
Sam the Bulloxer amin'ny 3 1/2 taona nipetraka tao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny.
spaniel picardy manga amidy
Sammy the Bulloxer puppy amin'ny 9 herinandro - ' Izy dia American Bulldog SY mpanao ady totohondry mifangaro.'
Roxy ny ½ American Bulldog ½ mpanao ady totohondry (Bulloxer) alika kely amin'ny 2 volana mitsako azy kilalao baolina kofehy .
Rocky the Bulloxer (American Bulldog niampita tamin'ny mpanao ady totohondry anglisy)
Bubba the Bulloxer amin'ny faha-2 taonany (American Bulldog / Boxer hybrid)
'Tahoe, ny Bulloxer-ko dia 2 taona amin'ity sary ity ary eo amin'ny toerana tiany indrindra, ny moron-dranomasina izy. Alika teo amin'ny 5 teo izao no nananako ary izy no alika tsara indrindra hatreto. Azonao atao ny mijery azy fotsiny ary mihomehy… izy dia be fitiavana, dorky, marani-tsaina, miaro ary namana ho an'ny rehetra sy ny zavatra rehetra ... ao anatin'izany ny saka! Ny sasany amin'ireo fialambolin'i Tahoe dia misy ny milevina ao anaty fasika, manenjika lalitra, mifanerasera amin'ny rehetra ary mivovo amin'ireo zavatra hitany voalohany… zavamaniry sandoka, hydrants afo, ary môtô mijanona! '
Casey Jane the Bulloxer amin'ny 6 volana milanja 60 lbs.
'Roxy the Bulloxer amin'ny 8 volana dia alika be fitiavana ary miaro antsika rehetra, ao anatin'izany ny zanako sy ireo alika telo hafa. Karazana kely rehetra ... Chin Japoney, Cockapoo ary Shih Tzu am-poaka. Ary manan-janaka kely 2 aho. Manodidina ny 55 pounds na mihoatra izy amin'ity sary ity. Tianay fotsiny i Roxy. Mamy izy. '
'Roxy the Bulloxer amin'ny faha-4 taonany - Faly be izahay fa manana azy ary faly izy manana anay. Milanja 65 pounds izy ankehitriny. Raha toa ny Roxy daholo ny Bulloxer dia tsy mino aho fa hahazo karazana alika hafa indray. Be fitiavana izy ary tsara fanahy amintsika rehetra. '
'Ny fialam-boly tiany indrindra dia ny manenjika akata manodidina ny tokontany. Heveriko fa mankafy ny lalao ihany koa ireo androngo. Mbola tsy nahita an'i Roxy nandratra iray aho rehefa tratrany tao ambany orony io. Matetika ny androngo dia mandositra amin'ny segondra farany alohan'ny hisamborana azy. '
Roxy the Bulloxer amin'ny 4 taona
Ity dia Bulloxer efa-taona antsoina hoe Sam. Sam dia mipetraka any Nova Scotia, Canada. Miomana amin'ny vanim-potoanan'ny fihazana izy !!
Max the Bulloxer (Boxer / American Bulldog mix karazany alika) eny an-tokotany
Max the Bulloxer (Boxer / American Bulldog mix breed dog) mandry ao anaty fasika.
Tifiro ny alika kely Bulloxer amin'ny 6 herinandro matory miaraka amin'ny sisiny lehibe Makya
Lisitry ny alika amerikana Bulldog mix
Fadiana fandrarana: Hevitra ratsy
Fanenjehana Ontario Style
Pyrenees lehibe 9 volana
inona avy ireo rà samihafa amin'ny pitbulls
shar pei chow mix alika kely
amerikana bulldog mavo mix mix
fotsy sy fotsy shih tzu
pitbull orona manga mifangaro amin'ny bulldog amerikana
omby mastiff amerikana bulldog mix